Tartiiba faayilii irraa deetaa dubbisa.
FileNumber: Baay'ina faayilii kan deetaa dubbisuu barbaadde of keessaa qabu. Faayiliin hima banaa irraa banamuu qaba jefuraa INPUT jedhamu fayyadamuudhaan.
var: Gegeedaramaa numeerikaalaa ykn diraa kan gatii faayilii banaa irraa dubbifamu.
Himni Input# gatii numeerikaalaa ykn diraa faayilii banaa irraa deetaa gegeedaramaa tokkoo fi isaa olitti mogaafama. Gegeedaramaan numeerikaalaa hanga daangaa toorbarruu (Asc=13) (Asc=10),iddoo,qoodduu dubbisa. Gegeedaraman diraa hanga toorbarruu(Asc=13), (Asc=10), ykn qoodduutti dubbisa.
Deetaa fi akaakuu deetaa faayilii banaa keessaa tartiiba tokkoon akka ulaagaa gegeedaramaa "var" mul'achuu qaba.Yoo gatii numeerikaala hin taane gegeedaramaa numeerikaalaati moggaaste "var" gatii "0" moggaafama.
Kuusaan qooddudhaan addan bahan gegeedaramaa diraatti hin moggafaman. Mallattoo waraabbii("") hubannoo keessaa galuu qaba.Yoo faayiliirraa arfii kana dubbisuu barbaadde sarara kana fayyadami hima Input# barruu qulqulluu sarara sararaan dubbisuuf (faayiliin arfii maxxanfamaa qofa of keessaa qaba).
Yoo dhumni faayilii dhaqabame ennaa maalimni deetaa dubbifamu dogogorrii uumamee hojiin addaan kuta.